Ingabe iqhwa elibomvana | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Wonke umuntu lapho bekhuluma ngeqhwa ucabanga futhi afike engqondweni ingubo emhlophe emhlophe ehlanganisa amasimu nezintaba, kodwa-ke kunesimo esiya ngokuya sivame kakhulu lapho iqhwa liphenduka lipinki ngokuphelele.
Yize lolu hlobo lweqhwa lungabonakala luhle ngokubuka okubukwayo, ukwakheka kwayo kungenxa yeqiniso elibi futhi akukho lutho oluhle engikutshela lona ngezansi.
Iqhwa elibomvana linencazelo yesayensi futhi ukuthi lesi sici sobuntu esidonsa ukunaka okukhulu kubantu abakubonayo, Kungenxa yokuba khona kwe-microalgae engafinyelela izigidi zamakhophi kuwo wonke amasentimitha eqhwa.
Umbala opinki obabazekayo kungenxa yezinhlamvu eziveza ukuqhakaza okukhulu futhi okuminyene okwaziwa nge- "blooms". Lolu hlobo lwesimo lungenzeka kunoma iyiphi indawo emhlabeni inqobo nje uma isimo sezulu silungile. Kodwa-ke, kunezingxenye zomhlaba ezijwayelene kakhulu neqhwa okuthiwa lipinki, njengeGreenland, iNorway, i-Iceland noma iSweden. I-microalgae ibangela ukuthi iqhwa licibilike ngendlela eshesha kakhulu kunokujwayelekile futhi lokhu kubangela ukuqhuma okukhulu kuyo yonke indawo eneqhwa. Inkinga yalokhu ukuthi ukuncibilika kweqhwa okungajwayelekile kuthanda ukufudumala okusabekayo komhlaba.
Ochwepheshe kule ndaba bacabanga ukuthi leli qhwa elibizwa nge-pink lizoba yinto ejwayelekile ngokwengeziwe eminyakeni ezayo, ikakhulukazi ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu kanye nokushisa komhlaba okuhlasela umhlaba wonke. Yingakho iqhwa elibomvana libhekwa njengesiqephu esihle futhi esibi nesinenkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Liyini iqhwa elibomvana
Isimo sezulu se-Equatorial